Nolosha Cusub :: Kitaabka Quduuska Ah :: Axdiga Cusub :: Qisadooyin Injiilka iyo Falimaha Rasuullada
Hoyga > Kitaabka Quduuska Ah > Axdiga Cusub > Qisadooyin Injiilka iyo Falimaha Rasuullada
Laba iyo tobankii xerta ahaa ee Sayid Ciise Masiix u doortay inay ka noqdaan markhaatiyaal eraygiisa maqal iyo aragti ahaanba, goobjoog ayay ahaayeen wax kaste oo uu sameeyay iyo wax kaste oo uu yiri Masiixu iyo waliba dhimashadiisii iyo sarakiciddiisii intaba. Xertii Sayid Ciise waxaa lagu amray inay u sheegaan qof kasta waxay maqleen iyo waxay arkeen ee Ciise Masiix ku saabsan. Kaddib Ciise Masiix markuu kor u baxay, Ruuxa Quduuska ah ayaa xusuusiyey xerta wax kasta oo Masiixu ku hadlay iyo waxa looga baahan yahay in ay qabtaan. Waxaana taasi ku qoran tahay Injiilka sida Yooxanaa u qoray 14:26: "Laakiin Gargaaraha Ruuxa Qoduuska ah oo Aabbuhu ku soo diri doono magacayga, wax kasta ayuu idin bari doonaa, wuxuuna idin xusuusin doonaa wax kasta oo aan idinku iri." Hawshooda waxaa lagu magacaabay "Falimaha rasuullada". Ereyga "rasuul" macnaheedu waa "dhambaalwade", "farriinwade" ama "safiir"
Waa La Qoray: war-baahintii rasuullada ee warka wanaagsan.
Markii hore rasuulladu akhbaartay hayeen waxay dunida ku soo gaarsiiyeen u sheegid keliya. Rasuulladu si xoog leh ayay u wacdiyeen oo warka wanagsan ee injiilka dhego walba maqashiiyeen. Erayga Injiil asal ahaan waa eray af-Gariig ah, waana "efaanjeloon", af-Carabigana wuxuu noqonayaa "injiil". Erayga "Injiil" micnihiisu waa "akhbaar wanaagsan" ama "bishaaro", Runtii wuu ahaa, wuuna yahay. Waa war wanaagsan oo qof kasta bishaaro khayr leh u wada.
Waa khayr iyo barako weyn oo qof kaste u gaajaysan yahay, runtii akhbaarta wanaagsan ee ku sugan Injiilka waxay inoo tahay nimco iyo naxariista Ilaah oo soo shaacbaxday. Qorayaasha Kitaabka Injiilka waxaa midba dhiniciisa wax uga qoray Ciise Masiix iyo shaqadiisii. Ha u malayn in farriimaha ama qisooyinka Injiilka ay ku dhan tahay wax alla wixii Sayid Ciise noloshiisii ku saabsanaa intuu dunida joogey. Taasu maba aha ujeeddada Injiilka. Waxay qoraayaashu doonayaan in ay muujiyaan sida Ilaah u fuliyey ballanqaadkiisii. Waxay muujinayaan in Ilaah badbaadshaha uu u soo diray inuu badbaadsho dadka oo dhan oo nolol cusub siiyo inta aqbasha oo dhan.
Hal Injil Miyaa Jira Mise Afar?
Afar Injiil ayaa laga helaa Baybalka, waxaanay kala yihiin:
Injiilka sida Matayos u qoray
Injiilka sida Markos u qoray
Injiilka sida Luukos u qoray
Injiilka sida Yooxanaa u qoray
Walaalayaal, Injiil waa farriin qura, waana farriin farxad iyo bishaaro u wada qof kasta oo bini-aadmi ah. Waa farriin aan iska caadi ahayn, waa farriin si buuxda u saamaynaysa naf kasta oo Ilaah abuuray xilligay doontoba ha jito e, waa farriin inoo bandhigaysa sida Ilaah u oofiyay qorshihiisa daa’imka ah ee aan weligii is beddeli doonin, waa farriin si buuxda inoo taabsiinaysa jacaylka iyo wanaagga Ilaah, Aammiin!
Kitaabka Falimaha Rasuullada waxay inoo sheegayaan, sida Ilaah u sii waday shaqadiisa dunida korkeeda kadib markuu Sayid Ciise Masiix samada tegay. Inkastoo kitaabkan la yiraahdo Falimaha Rasuullada, haddana kitaabku kuma saabsana dhammaan rasuulladu wixii ay sameeyeen intii Sayid Ciise kor u baxay kaddib. Waliba intooda badan magacyadoodu kitaabkan kuma qorna. Kitaabkan akhbaartiisu waxay ku saabsan tahay sida Ciise Masiix u maaraynayo wacdiska akhbaarta wanaagsan ee badbaadada kor u bixitaankiisa kaddib (Falimaha Rasuullada 2:33,3:16,9:1-6).
Waxaa Masiixu ku amray rasuulladiisa amarkan, sida ku qoran Falimaha Rasuullada 1:8. Waxaana qoran sidatan: "Laakiinse waxaad heli doontaan xoog markii Ruuxa Qoduuska ahi idinku soo dego; oo markhaatiyaal ayaad iiga noqon doontaan Yeruusaalem, iyo Yahuudiya oo dhan, iyo Samaariya, iyo meesha dunida ugu fog." Rasuulladii amarkaas waxay u fuliyeen sidii loo faray. Waxay markhaatifurkiisa ka ahaayeen markii hore Yeruusaalem, waa cutubyada 2-7; kaddibna Yahuudiya, Samaariya iyo Suuriya waa cutubyada 8-12; ugu dambayntiisa dunida ilaa Rooma, sida ku xusan cutubyada 13-28.
Laga bilaabo cutubka 13 aad kitaab kani wuxuu ku saabsan yahay shaqadii rasuul Bawlos ee Aasiyada Yar [maantana loo yaqaan waddanka Turkiye] iyo Yurub. Bawlos, oo markii hore la oran jirey Sawlos, wuxuu ahaa wiil uu dhalay nin ka tirsanaa dariiqa Farrisiinta, (Falimaha Rasuullada 9:13). Isagoo ay ka buuxdo carada uu u qabo injiilka Masiixa, wuxuu bilaabay inuu ugaarsado Masiixiyiinta, ilaa Sayid Ciise laftiisu arrinta soo dhexgalay (Falimaha Rasuullada 9:3-19). Ciise Masiix Sawlos-kii caraysnaa wuxuu u beddelay Bawlos oo wacdiyaha Injiilka noqday. Ciise wuxuu hor kacay Bawlos oo ku hagaajiyey meeluhuu injiilka ku wacdiyi lahaa (Falimaha Rasuullada 13:2,16:6-10,23:11). Injiilku wuxuu gaaray bartamaha Embaaradooriyaddii Rooma, wacdintana wuu sii waday iyadoon waxba hor istaagin muddo laba sanadood ah. Hawshii rasuullada waa dhammaystirantay.